ZhuZi Art Incwadi - Imagazini yoyilo
Incwadi Uluhlu lweeinguqulelo zeencwadi zemisebenzi eqokelelweyo ye-calligraphy yesiTshayina kunye nokupeyinta ipapashwa yiNanjing Zhuzi Art Museum. Ngokwembali yayo ende kunye nobuchule obugqwesileyo, imizobo yesiTshayina yendabuko kunye ne-calligraphy zixatyisiwe ngenxa yokubhenela kwabo kakhulu kubugcisa kunye nokusebenzayo. Xa uyila ingqokelela, kuye kwasetyenziswa imilo engafunekiyo, imibala kunye nemigca ukudala ubuntununtunu obungaguqukiyo kunye nokuqaqambisa indawo engenanto kwisiketshi. Okungenzi nzame kukudibana namagcisa ngokupeyinta kwendabuko kunye nezitayile ze-calligraphy.
Igama leprojekthi : ZhuZi Art, Igama labayili : XI ALICE ZONG, Igama lomthengi : ZHUZI Art Center.
Shicilela kwaye upapashe uyilo lweendaba
Incwadi XI ALICE ZONG ZhuZi Art